Buugaagta sayniska ugu fiican
3da Buugaag ee Oliver Sacks
Marka buugaagta saynisyahanku ee ku saabsan sayniskiisa ay noqdaan nooc ka mid ah kuwa iibiya macluumaadka, waa shaki la'aan maxaa yeelay waxaan hor joognaa qoraa danaynaya inuu aqoontiisa u weeciyo qof kasta oo doonaya inuu kala furfuro, xitaa haddii ay tahay furayaasha ugu horreeya ama milicsigiisa cad, xiiso leh ...
Waqtiga iyo Biyaha, waxaa qoray Andri Snaer Magnason
In ay lama huraan tahay in la waajaho hab kale oo lagu noolaado meerahan, shaki kuma jiro. Maritaankeenna adduunka waxaa lagu calaamadeeyay astaamo summad leh maadaama ay yihiin wax aan macquul ahayn haddii aan u kuurgalno isbarbar dhigga waqtigeenna ee Cosmos -ka. Sidaas darteed aan muhiim ahayn oo awood u leh inay wax walba beddelaan. Dhulku wuu noolaan doonaa oo waxaan ahaan doonaa ...
Sida looga fogaado Musiibada Cimilada, waxaa qoray Bill Gates
Warka muddo dheer ma ahayn mid lagu faano, xitaa qeybta cayaaraha (gaar ahaan taageere Real Zaragoza). Iyo, kaftan dhinac ah, arrinta ku saabsan caalamiyeynta, isbeddelka cimilada waxaa diiday Rajoy inaadeerkii sayniska, iyo tan si farxad leh isu beddelaysa coronavirus ...
Raad -raadkii: Raadinta Adduunyada Waxaan Ka Tagi Doonnaa, David Farrier
Sidee bay noo arki doonaan mustaqbalka? Si kale haddii loo dhigo, waa arrin mala -awaal ah laga bilaabo sannadka 3024 -ka, nooc kasta oo uu noqon karo, hortiisa buugga wax laga akhrinayo oo ku saabsan bini -aadamnimada qabsaday dunida intii aan ku dhex neefsanaynay cosmos -ka. Waxaa laga yaabaa in qofka dhallinta yari u malaynayo inuu yaabay ...
Extraterrestrial, oo uu qoray Avi Loeb
Cinwaanka oo buuxa waa “Dhulka ka baxsan: Bani -aadamnimada calaamadda ugu horreysa ee nolosha caqliga leh ee ka baxsan Dhulka” waana in la akhriyo ugu yaraan laba jeer si loo qaato muhiimadda sheegashadaas. Kadib boqolaal sheeko -wadaag, filimaan, dawooyin nafsaani ah iyo sirta sare ee NASA, waxay umuuqataa inay ...
Nolosha ayaa sapiens u sheegtay Neanderthal, oo uu qoray Juan José Millas
Waxay noqon doontaa wada hadal u sheega nolosha ... Sababtoo ah hal shay ayaa ah in dillaacyada loogu yeerayo inay yihiin kuwa ugu xun ee ka dhex shaqeeya nacasnimada muuqata ee indhahooda godan, iyo wax kale oo ah inaan la kulanno laba nin oo proto-men ah, gacanta ku dheggan, diyaar u ah inaan ka hadlo dhammaadka ...
5 buug oo ugu fiican galmada
Tan iyo markii Dr. Ochoa uu shaashadda ka soo muuqday horraantii 90 -meeyadii, galmada iyo jinsi -galintu waxay bilaabeen inay si wadajir ah ugu socdaan siyaabaha lagama maarmaanka u ah shaacinta ugu caansan. Arrinta galmadu waxay qaadatay cabbirka meel wadahadal iyo cilmi baaris (sida wax kasta oo ka muuqda telefishanka). The…
Hanjabaadii Ugu Darnayd, Waxaa qoray Michael T. Osterholm
Buuggii nebiyada oo markii ugu horreysay ka digay dhibaatada coronavirus. Buuggan, oo uu qoray mid ka mid ah khubarada dunida ugu horreeya ee ku takhasusay cudurrada faafa, ayaa saadaaliyay masiibada ku dhufanaya meeraha tallaabo tallaabo. Daabacaaddan la cusboonaysiiyay waxaa ku jira hordhac kaas oo ay xiisadda ...